मानसिक रोगीको निःशुल्क उपचार : थापा - Everest Dainik - News from Nepal
मानसिक रोगीको निःशुल्क उपचार : थापा
२०७३, २५ चैत्र शुक्रबार
काठमाडौं, चैत २५ । स्वास्थ्यमन्त्री गगन कुमार थापाले मानसिक रोगीहरुको निःशुल्क उपचार
गरिने बताएका छन् ।
मानसिक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी बनाउन लागिएका नीति प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र यो नीति प्रक्रिया लागु भएपछि सबै मानसिक बिरामीको निःशुल्क उपचार गरिने उनको भनाइ छ ।
याे पनि पढ्नुस ३ नं. प्रदेशको मूख्यमन्त्रीमा गगन थापाको दावी
विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री थापाले सो जानकारी दिएका हुन् ।
‘उदासीनता रोग : खुलेर कुरा गरौं’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइएको हो ।
आर्थिक संकट, बेरोजगारी, पारिवारिक–सामाजिक द्वन्द्व र असफलताजस्ता कारणले संसारभर उदासीनता रोगका बिरामी बढ्दै गएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस स्वास्थ्यमन्त्री थापाले दान गरे आफ्नो शरीरको सात अंग
संगठनकाअनुसार विश्वका ३ करोड मानिसमा उदासीनताको समस्या छ भने नेपालमा १० लाख मानिसमा यो समस्या छ ।
सहजै खुसी महसुस गर्न नसक्ने, शरीर गल्ने, छिटो थकाइ लाग्ने, आत्माहत्याको सोच आउने, सहजै ध्यानकेन्द्रित नहुनेजस्ता लक्षणलाई चिकित्सकहरुले मानसिक समस्या भनेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस मापदण्ड बिपरित अस्पताल अध्यक्षमा ठेकेदार !
ट्याग्स: gagan kumar thapa, manasik rogi, World Health Day
सहकारीमा कर्जाको ब्याजदर घट्ने, अधिकतम ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत
डा. केसीको उपचारका लागि ८ सदस्यीय चिकित्सक टोली गठन
आइपीएल : राजस्थानविरुद्ध टस जितेर बलिङ गर्दै चेन्नई
अष्ट्रेलियामा ९० ह्वेलको मृत्यु, अलपत्र १८० को उद्धार गरिँदै
मालीका सैनिक प्रमुख उपराष्ट्र हुन तयार, विपक्षीको विरोध जारी
६ केजी गाँजासहित १ जना पक्राउ
मृतकका परिवारलाई २ लाख सहयोग